မကြည့်ရက်လို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မကြည့်ရက်လို့
Posted by Good Idea on Jun 26, 2011 in Aha! Jokes, Satire |4comments
ကျနော်မေးလ်ထဲ ရောက်လာတဲ့ဟာသလေးကို ဝေမျှတာပါ။ အားလုံးပဲ ဘ၀အမောပြေနိုင်ကြပါစေ…
ဖြေ ။ဂစ်လို့ အော်တဲ့ဌက်တစ်ကောင်မှာတစ်ဗိုက်ဘဲရှိပါတယ်
မေး ။ email ပို့ နေရင်းconnectionပြုတ်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးပါလဲ
ဖြေ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ကွန်ပျူတာပါဝါပိတ်ပြီးအိပ်ပါဆိုင်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်ပါ
မေး ။ကွန်ပျူတာထဲဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရင်ဖြေရှင်းပုံလေးအသေးစိတ် ပြောနိုင်မလား
၃။ပြီးရင်တော့ဆပ်ပြာမှုန့် များများနဲ့ ဖျော်ထားတဲ့ ဇလုံထဲကိုထည့်ပြီး Decogenနဲ့ တစ်ညစိမ်ပါ
၇ ။ နောက်ပိုင်းသုံးရင်SYSTEM ပုံးကိုဗိုင်းရပ်စ်ထပ်မ၀င်အောင်နေပူထဲထားကာအသုံးပြုပါ။
မေး ။သမီးကွန်ပျူတာအရမ်းလေးနေလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ကူပါဦး
ဖြေ ။ အရင်ဆုံးဟတ်ဒစ်(စ်)ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ ။ ဒါမှလေးနေရင်ပါဝါစပလိုင်းထပ်ပါဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့…….အရမ်းအရမ်းပေါ့သွားမယ်
မေး ။ကျွှန်တော်တို့ ဘက်ကမီးမှန်ဘူး ။ UPS ကလဲသိပ်မကောင်းတော့ မီးပျက်ချိန်ကွန်ပျူတာမြန်မြန်ပိတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဖြေ ။ upsနဲ ကွန်ပျူတာသွယ်တားတဲ့ပလပ်ကိုချက်ချင်းဆွဲဖြုတ်ပါ။ချက်ချင်းပိတ်သွားရစေမယ်
မေး။ ကျွှန်တော့်windowကအဖွင့်အပိတ်ကြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ window မှာပြသနာရှိလို့ လား
ဖြေ။ ဟုတ်ပါတယ် window ကိုအဖွင့်အပိတ်ချောင်အောင်ပတ္တာမှာဆီနဲနဲ ထိုးပေးပါ ။
ဖြေ။အဲ့ဒီအီးမေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါ-သင့်စက်ထဲဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လို့ ရှိရင်ဗိုင်းရပ်စ် ပါလို့ ပေါ့ကွယ်
( ဟိ…ဟိ မတိတူများ သေသေချာချာ မှတ်ထားကြနော်…)
တနေ့..ဆရာဝန်ဆီသို့ လူနာ၁ ယောက်ရောက်လာသည်..
လူနာ….. ဆရာ ကျွန်တော်ကို ကုပေးပါဦးဆရာ
လူနာ…..ကျွန်တော်ညတိုင်းအိပ် မက်မက်တယ်…..အိပ်မက်ထဲက လူကြီး၁ ယောက်က လာပြောတယ်
ကျွန်တော့်ကို ရူးရူးပေါက်ရအောင်ဆိုပြီးလာလာပြောနေတော့ ကျွန်တော်လဲအပြင်မှာပေါက်ချမိရောဗျ..
ဆ၇ာဝန်…. အာ…ဒါဆိုနောက်၁ခါလာရင် ပြောလိုက်ကွာ..ကျွန်တော်ပေါက်ပြီးပြီးလို့
နောက်တနေ့ ……….. ထိုလူနာေ၇ာက်ချလာပြန်သည်..
လူနာ…..ဆ၇ာရယ် ညက အိပ်မက်တယ်
ဆ၇ာဝန်…. ဟ… မင်း က ငါပြောခိုင်းသလို မပြောဘူးလားကွ..
လူနာ…..ပြောပါတယ်ဆရာ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ့လူကြီးက ကျွန်တော့ကိုပြောတယ်..
” ဒါဆို အီးအီးပါလိုက်ကွာ.” တဲ့
အလုပ်ရှင်က အတွင်းရေးမှူးမကို ပြောသည်။ ငါ့တို့ နိုင်ငံ့ခြားကိုတစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထား။
အတွင်းရေးမှူးမက သူ့ ယောင်္ကျားထံ ဖုန်းဆက်၏။ ကျွန်မ သူဌေးနဲ့ကျွန်မနိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ် ။ ရှင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြည့်နေနော် ယောကျာင်္းက သူ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်သူထံဖုန်းခေါ်သည်။
ကိုယ့်မိန်းမ နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့တစ်ပတ်လုံး အတူနေကြရအောင်။ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက သူမ သီးသန့် ကျူရှင်ပေးနေသော ကောင်လေးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါ တစ်ပတ်လောက်အလုပ်လုပ်စရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းစာလာသင်စရာ မလိုဘူး ကောင်လေးက သူ့ အဘိုးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး၊ ကျွန်တော့်ဆရာမ အလုပ်များနေလို့
တစ်ပတ်လောက် စာမသင်ရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပတ်လုံးနေပြီးအချိန်ဖြုန်းရအောင်။ အဘိုး(အလုပ်ရှင်သူဌေး)က သူ့ အတွင်းရေးမှူးကို ဖုန်းဆက်သည်။ ဒီအပတ်ငါမြေးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရမယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကို မတက်နိုင်တော့ဘူး။
အတွင်းရေမှူးက သူ့ ယောင်္ကျားကို ဖုန်းခေါ်သည်။ ကျွန်မအလုပ်ရှင်က ဒီတစ်ပတ်ထဲလုပ်စရာလေးတွေရှိတယ်။ ခရီးစဉ်ကို ဖြတ်လိုက်တယ်။ ယောင်္ကျားက သူ့ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါတို့ ဒီတစ်ပတ် အတူတူအချိန်မဖြုန်းနိုင်တော့ဘူး။ ငါ့မိန်းမ ခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်တယ်။ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက ကျူရှင်သင်ပေးနေသည့် ကောင်လေးထံ ဖုန်းခေါ်သည်။
ဒီတစ်ပတ် ငါတို့ ပုံမှန်အတိုင်း စာသင်ဖို့ ရှိတယ်။ ကောင်လေးက သူ့ အဘိုးထံဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး ကျွန်တော့်ဆရာမက ပြောတယ်။
ကျူရှင်တက်ရမယ်တဲ့ အဘိုးနဲ့အဖော်မလူပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အဘိုး (အလုပ်ရှင်)က သူ့ အတွင်းရေးမှူးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကို ဒီတစ်ပတ် ဒို့ တက်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထားလိုက်။
ဒါပေမဲ့ ရှင့်မှာလည်း ပစ္စည်းကရိယာနဲ့
တစ်ခါက လင်မယား နှစ်ယောက်သည်
ငါးမျှားလို့ရသော အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကို အားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။
ယောက်င်္ျားက ငါးမျှားလျှင် ခဏတဖြုတ် ပဲမျှားချင်၏် ။ မိန်းမကတော့ စာဖတ်ဝါသနာ
ပါလေသည်။ တစ်ရက်သောမနက်ခင်းမှာ အချိန် အကြာကြီး ငါးမျှားရာမှ ပြန်လာသော
ယောင်္ကျားက တရေးတမောအိပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ မိန်းမ ကတော့ စာဖတ်မည်ဟု စိတ်ကူး၍ ရေကန်ထဲတွင် လှေထုတ်လှော်သည်။ ဟိုနားဒီနား လှေလှော် ကြည့်ရင်း ပျင်းလာသောအခါ စာအုပ်ထုတ် ၍ စာဖတ်နေလိုက်သည် ။
ထိုအခါ တာဝန်ရှိသူအရာရှိတစ်ယောက် မော်တော်ဘုတ်ဖြင့် ရောက်လာသည် ။
လှေအနား ကပ်လာကာ ဒီလိုစမေးလေသည် ။
မိန်းကလေးက “စာအုပ် ဖတ်နေ ပါတယ်” ဟုပြန်ဖြေရင်း ဒီလူ မျက်စိကန်းနေတာလားဟု တွေးလိုက်သည်။
“ဒီနေရာမှာ ငါးမျှားခွင့် မရှိဘူး မိန်းကလေး” “ဒီနေရာဟာ ကန့် သတ်နယ်မြေ”
“မင်းရဲ့လှေပေါ်မှာ ငါးမျှားတံတွေနဲ့ ငါးမျှားတဲ့ ပစ္စည်းကရိယာ အစုံအလင်ပါနေတယ်”
“ရှင်က ငါးမျှားတံတွေနဲ့ ငါးမျှားတဲ့ ပစ္စည်းကရိယာ အစုံအလင်ပါနေလို့ ကျမကို
ဒါဏ်ငွေရိုက်မယ်ဆိုရင် ရှင့်ကိုလဲ မုဒိမ်းမှု နဲ့ တရားပြန်စွဲ ရလိမ့်မယ်” ဟု မိန်းကလေးက ပက်ခနဲ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
အရာရှိက ကြောက်လှန့်တကြား ပြောလိုက်၏။
အိမ်နီးချင်းကို “ဝက်” လို့ဆဲလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက် တရားရုံးရောက်သွားခဲ့တယ်။ တရားသူကြီးက ဆဲမှုအတွက် သူ့ကို “၂ဝဝ” ဒဏ်ငွေခတ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဆဲသူက မကျေမနပ်နဲ့ “အရင်တစ်ခေါက် တခြားတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် ဝက်လို့ဆဲတုန်းက ဒဏ်ကြေး ၁၅ဝပဲ ပေးခဲ့ရတယ်။ အခုဘာဖြစ်လို့ ၂ဝဝဖြစ်သွားတာလဲ!” လို့ဆိုတော့ တရားသူကြီးက “စိတ်မကောင်းဘူးကွာ… ခုတစ်လော ဝက်သားဈေးတွေ တက်နေလို့ပါ” တဲ့။